जित्न सक्ने छानेर मात्र टिकट दिइनेछ :: डा.रामशरण महत (नेता, नेपाली काङ्ग्रेस) – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
६ कार्तिक २०७७, बिहीबार ०६:५७ English
जित्न सक्ने छानेर मात्र टिकट दिइनेछ :: डा.रामशरण महत (नेता, नेपाली काङ्ग्रेस)
० नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनाव लाग्न समय लाग्यो नि, किन होला ?
– नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनाव लागिसकेको छ, चुनावका सवालमा काङ्ग्रेस धेरै अगाडि बढिसक्यो । आगामी दिनमा चुनावी रौनक झन् चढ्दै–बढ्दै जाने निश्चित छ ।
० काङ्ग्रेसले उम्मेदवार चयन प्रक्रिया सुरु गर्न लागेछ, उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया र मापदण्डचाहिँ के छ नि पार्टीको ?
– उम्मेदवार सिफारिस गरी पठाउन काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जिल्ला र क्षेत्रीय समितिहरूलाई परिपत्र जारी गरिसकेको छ । अब क्षेत्रीय समितिले क्षेत्रीय सम्मेलन गरेर आपसी परामर्शका आधारमा उम्मेदवारहरूको सिफारिस जिल्लामा पठाउँछ । त्यसपछि जिल्ला समितिले आफ्नो टिप्पणीसहित उक्त उम्मेदवारहरूको सूची केन्द्रमा पठाउँछ । यसरी जिल्लाबाट प्राप्त नामहरूमध्येबाट केन्द्रले प्रत्येक क्षेत्रका लागि एक–एकजना उम्मेदवार तोक्छ ।
० अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय बोर्ड नै गठन गर्न सकेको छैन, यसले उम्मेदवारी चयन कार्यमा व्यवधान खडा गर्दैन र ?
– पहिले क्षेत्र र जिल्लाबाट सिफारिस आउनुपर्‍यो, अनि अन्तिममा मात्र केन्द्र वा संसदीय बोर्डले आफ्नो काम गर्ने हो । हो, केही पदेन सदस्य त छँदै छन् तर बोर्डले पूर्णता पाएको छैन । अब उचित समयमा काङ्ग्रेसको संसदीय बोर्ड पनि गठन हुन्छ । यसका निम्ति सभापतिले नाम प्रस्ताव गर्नुहुन्छ र केन्द्रीय समितिले त्यो पास गर्छ । उम्मेदवार छनोटमै बाधा पुग्ने अवस्था त छैन काङ्ग्रेसमा ।
० यसपटक कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँदै छ नि काङ्ग्रेसले ?
– वर्तमान परिप्रेक्षमा यो सवाल अहम् महत्त्वको छ । पार्टीले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने पक्ष नै यही हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । पार्टीमा जसको योगदान छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जसको पकड र छवि राम्रो छ, जो लोकप्रिय छ, जसको जित्ने सम्भावना पनि तुलनात्मक रूपमा ज्यादा छ यस्ता व्यक्ति छानेर उम्मेदवार बनाउने हो । उम्मेदवार छान्दा मूल रूपमा हेर्ने वा हेरिने पक्ष यही नै त हो ।
० काङ्ग्रेसमा टिकट पाउन नेताविशेषको कृपा हुनुपर्छ, नेताको चाकडी गर्नुपर्छ, व्यक्ति सक्षम नभए पनि या अलोकप्रिय भए पनि चाकडी–चाप्लुसी गर्ने क्षमता छ भने टिकट पाउँछ भन्ने गरिन्छ नि ?
– यस्तो आरोप लाग्ने गरेको छैन भन्न म सक्दिनँ । तर, यसपालीको निर्वाचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, काङ्ग्रेसको भविष्यको सवाल छ । कतिपयले त पार्टीको जीवनमरणकै प्रश्न छ भनेर पनि भन्ने गरेका छन् । त्यसैले यसपाली पुरानो ढङ्गबाट उम्मेदवारी चयन हुँदैन । उम्मेदवार कार्यकर्ताबीच लोकप्रिय हुनुपर्छ र कार्यकर्ताबीचबाटै छानिएर आउनुपर्छ । क्षेत्रीय तहबाटै सिफारिस आउनुपर्ने प्रावधान यही अवधारणाबाट प्रेरित छ ।
० कार्यकर्ताबाट सिफारिस आएकैलाई तपाईंहरू टिकट दिनुहुन्छ त ?
– जिल्लाबाट एकजनाको मात्रै सिफारिस आउने त होइन, एउटै क्षेत्रबाट तीन–चारजनाको नाम आउँछ । यस्तोमा छानिने त एकजना मात्र हो । अन्तिम छनोटमा नपर्नेले आफूमाथि अन्याय भएको ठान्न सक्छ, यो अस्वाभाविक पनि होइन । तर, यसपटक काङ्ग्रेसले तेरो–मेरो नभनी लोकप्रिय, जित्न सक्ने वा सक्षम उम्मेदवार नै छान्ने नीति लिएको छ ।
० भनेपछि जेल–नेल भोगेका, दु:ख पाएका कार्यकर्ताले यसपटक टिकट पाउँदैनन् ?
– यस्तो कसले भन्यो ? के जेल–नेल भोगेका, दु:ख पाएका, पुराना काङ्ग्रेस साथीहरूचाहिँ लोकप्रिय र जित्ने खुवी नभएका हुन्छन् ? त्यस्ताहरू त झन् लोकप्रिय र जित्ने सम्भावना बोकेका हुनसक्छन् नि । तर, पुराना र दु:ख पाएका भन्दैमा कार्यकर्तामा पकड छैन भने, जित्ने सम्भावना छैन या कम छ भने त त्यस्ता चुनावी क्षेत्रमा नयाँ भए पनि, जेलनेल नभोगेकै व्यक्ति भए पनि प्रजातन्त्र र पार्टीको नीति–सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध, अनुशासित, लोकप्रिय र जित्ने खुबी राख्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुचाहिँ यसपटकको बाध्यता नै हो भन्न खोजेको हो मैले ।
० अब युवा पुस्तालाई नै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने आवाज त प्रखर रूपमा उठ्न थालेको छ काङ्ग्रेसभित्र, यसको सम्बोधन कसरी गर्दै छ काङ्ग्रेसले ?
– युवा पुस्तालाई अघि बढाउनुपर्छ, मौका दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्नु के अस्वाभाविक भयो त ? उनीहरू पनि लोकप्रिय र सक्षम हुन सक्छन् । मतदाता या स्थानीय कार्यकर्ताको चाहनामा भर पर्ने कुरा हो यो । युवा पनि पर्न सक्छन्, अलिक पाका र पूरै अनुभवी व्यक्तित्वहरू पनि उम्मेद्वारको कोटिमा पर्न सक्छन् । युवाहरूमा बेग्लै जोस, जाँगर र ऊर्जा हुने हुँदा उनीहरूलाई निश्चय पनि मौका र प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर, यसो भन्दैमा अन्य उमेर–समूहका व्यक्तिको महत्त्व नै समाप्त भयो भन्ने ठान्नु स्वाभाविक, सान्दर्भिक र व्यावहारिक कुरा हुन सक्दैन । सबै वर्ग र उमेर समूहका व्यक्ति काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार हुन सक्छन् ।
० त्यसो भए काङ्ग्रेसको उम्मेदवार छनोटमा यसपटक कसैलाई काखापाखा नगरी निश्पक्ष विधि अपनाइनेमा सम्बन्धित सबैले ढुक्क भए हुन्छ, होइन त ?
– हो । यो कुराको मूल्याङ्कन निकट भविष्यमै गर्न सकिनेछ । यसपटकको उम्मेदवारी छनोट प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि कस्ता–कस्ताले टिकट पाए भनी मूल्याङ्कन गरे हुन्छ ।
० चुनावी खर्च कसरी जुटाउँदै छ नि नेपाली काङ्ग्रेसले ?
– शुभेच्छुक, सहयोगीजनबाट सहयोगको आह्वान गर्दै छौँ । यसका लागि इलेक्ट्रोनिकदेखि अन्य माध्यमहरू पनि उपयोग गर्दै छौँ । व्यक्तिगत पहुँचको उपयोग पनि गरिने नै छ । जे होस्, जबर्जस्ती गरेर चन्दा माग्ने काम हामीले कहिल्यै गरेनौँ र गर्दैनौँ पनि । हार्दिकतापूर्वक सहयोग गर्न चाहने विश्वभर छरिएर रहेका शुभचिन्तकहरूको चन्दा सहयोग मात्र हामी प्रक्रिया पुर्‍याएर स्वीकार गर्नेछौँ । पारदर्शी ढङ्गले सहयोग मागिन्छ र पारदर्शी किसिमबाटै निर्वाचनमा खर्च गरिनेछ । पार्टीले यसका लागि सभापतिकै संयोजकत्वमा एउटा विशेष समिति पनि निर्माण गरिसकेको छ ।
० प्रसङ्ग बदलौँ, नेकपा–माओवादीलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा ल्याउनका लागि काङ्ग्रेस निर्वाचनको मिति सार्न पनि तयार छ भन्ने चर्चा छ, यो कति सत्य हो ?
– यस्तो चर्चा मैले सुनेको छैन, चुनावको मिति सारिरहनुपर्ने कुनै कारण र आवश्यकता पनि मैले देखेको छैन । यदि अन्य कुनै पनि सर्त नराखेर माओवादी चुनावमा भाग लिन तयार हुन्छ र त्यसका लागि केही दिन निर्वाचन सार्ने माग गर्छ भने त्यसमा विचार गर्न सकिन्छ । तर, वैद्यजीहरूले जुन १८बुँदे सर्त राख्दै आउनुभएको छ, त्यसलाई नै वार्ताका क्रममा मुख्य रूपले अघिसार्ने गर्नुभएको छ, न कि निर्वाचनको मितिलाई मात्र उहाँहरूले महत्त्व दिनुभएको छ । त्यसकारण चुनावको मिति सार्दैमा माओवादी चुनावमा आउने निश्चितता छैन । मिति सारिँदैन र सार्नुको औचित्य छैन भनेर मैले भन्नुको कारण पनि यही नै हो ।
५ भाद्र २०७०, बुधबार ०७:०३ मा प्रकाशित